ICasa Morelos Uno6Nueve Suite / iApartment yaseTurquesa - I-Airbnb
ICasa Morelos Uno6Nueve Suite / iApartment yaseTurquesa
Amagumbi akhululekileyo kwaye amahle okanye i-suite encinci entliziyweni ye-Chapala, ekwiziko lembali ledolophu. Kumgama wokuhamba weendawo zokutyela ezininzi ezikufutshane kunye neendawo zokutyela ezineezohlukeneyo zokutya kunye neentlobo ezahlukeneyo zezitya
Ifulethi elitofotofo nelihle okanye i-suite encinci entliziyweni ye-Chapala, ekwiziko lembali ledolophu. Ukuhamba umgama weekhefi ezininzi kunye neendawo zokutyela ezikufutshane kunye nezibonelelo ezahlukeneyo zokupheka kunye neentlobo ezahlukeneyo zezitya.
Ifakwe kumbindi wembali wedolophu, ibhloko enye ukusuka kwimakethi kamasipala okanye isikwere esikhulu, iHolo yeDolophu, indlela ephambili kunye nendawo yorhwebo. Kwakhona nje iibhloko ezimbini ukusuka boardwalk, kunye nepaki yobuKristu, inkulu ngobukhulu bayo kunye neendawo ezinkulu eziluhlaza kunye nezemidlalo elunxwemeni lwechibi.
Indawo yokupaka yasimahla esitratweni okanye ungathethathethana okanye wenze isivumelwano sokusebenzisa indawo yokupaka yabucala ebiyelwe ngokupheleleyo ibhloko enye ukusuka kwindawo yokuhlala.
Le ndawo yeyomgangatho we-rustic kunye nesitayile sangoku, kuba zibekwe kumgangatho wesibini wendlu endala, zizama ukugcina imvelaphi ethile kwigumbi ngalinye elinje ngemigangatho ye-mosaic eyenziwe ngezandla kodwa yongeza kwisitayile sobutofotofo ngakumbi ekugqityweni kwayo, mihla kwaye ikhululekile, eneendawo eziluhlaza kunye nezivulekileyo ngaxeshanye.
Ifakwe kumbindi wembali wedolophu, ibhloko enye ukusuka kwimakethi kamasipala okanye iMain Square, iHolo yeSixeko, indlela ephambili kunye nendawo yokuthenga. Ukongeza kwiibhloko ezimbini kuphela ukusuka kwi-lakeshore boardwalk, kunye nepaki yaseCristiania, eyona inkulu ngobukhulu bayo eneendawo ezinkulu eziluhlaza kunye nezemidlalo kunxweme lwechibi.
Indawo yokupaka yasimahla esitratweni okanye ungathethathethana okanye wenze isivumelwano sokusebenzisa indawo yokupaka yabucala ebiyelwe ngokukhuselekileyo ibhloko enye ukusuka kwindawo yokuhlala.
Le ndawo yeyomgangatho we-rustic kunye nesitayile sexesha langoku, kuba ibekwe kumgangatho wesibini wendlu yakudala okanye yakudala yasedolophini, bezama ukugcina imvelaphi ethile kwigumbi ngalinye njengeethayile zabo ezenziwe ngezandla, kodwa bongeza kwisitayile sobunewunewu ngakumbi. ukugqiba, izinto zangaphakathi zanamhlanje kunye nezikhululekile, kunye neendawo eziluhlaza kunye nezivulekileyo ngexesha elinye.
4.88 · Izimvo eziyi-205
Indawo ezolileyo, kwaye ikhuseleke kakhulu, kukho isebe lamapolisa kunye neklinikhi yezonyango kumgama oziibhloko ezimbalwa. Kufuphi nezinto ezininzi eziluncedo, iindawo zenkcubeko okanye zolonwabo, iikhefi, iindawo zokutyela kunye nezithuthi zikawonke-wonke ezingqongileyo.
Indawo ezolileyo, kwaye ikhuseleke kakhulu, kukho isebe lamapolisa kunye neklinikhi yezonyango kumgama oziibhloko ezimbalwa. Kufuphi nezinto ezininzi eziluncedo, iindawo zenkcubeko okanye zolonwabo, iikhefi, iindawo zokutyela kunye nezithuthi zikawonke-wonke kwindawo ekufutshane.
Kwimeko apho ufuna naluphi na ulwazi okanye uncedo, kukho umamkeli-zindwendwe kufutshane nendawo okanye ofikelelekayo kwiselfowuni yakho nangaliphi na ixesha losuku.
Kwimeko apho ufuna ulwazi oluthile okanye uncedo, uya kufumana umamkeli kufutshane nendawo okanye kwiselfowuni yakho nangaliphi na ixesha lemini.